Sargaal katirsan maleeshiyada Al-Shabaab oo isku dhiibay ciidamada dowladda Soomaaliya ee ku sugan gobolka Gedo - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaSargaal katirsan maleeshiyada Al-Shabaab oo isku dhiibay ciidamada dowladda Soomaaliya ee ku sugan gobolka Gedo
August 29, 2017 Puntland Mirror Somalia 0
Sargaal katirsan maleeshiyada Al-Shabaab oo isku dhiibay ciidamada dowladda Soomaaliya ee ku sugan gobolka Gedo. [Sawirka: Archive]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Sargaal katirsan maleeshiyada Al-Shabaab ayaa isku dhiibay ciidamada dowladda Soomaaliya ee ku sugan magaalada Garbahaaray ee gobolka Gedo, sida ilo-wareedyo ciidamada ah ay u xaqiijiyeen warsidaha Puntland Mirror.
Sargaalka oo magaciisa la dhaho Adam loona yaqaan Abu Mujaahid ayaa subaxnimadii maanta oo Talaado ah isku dhiibay gacanta dowladda, sida ay ilo-wareedku sheegeen.
Bilihii lasoo dhaafay, saraakiil iyo dagaalyahano katirsanaa ururka hubaysan ee Al-Shabaab ayaa isa soo dhiibay.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa cafis u fidiyay maleeshiyada Al-Shabaab haddii ay isa soo dhiibaan.
June 1, 2017 Sarkaal katirsan Al-Shabaab oo isku dhiibay dowladda Soomaaliya
June 24, 2017 Mareykanka oo sheegay in liiska argagixisada uu ka saaray Mukhtaar Roobow Abu Mansuur oo kamid ah hoggaamiyaasha Al-Shabaab